Ny teny hoe Tanakh (תַּנַ"ךְ), Thanak na Tanak dia fanafohezana ny andian-teny hebreo hoe Tôrah (תּוֹרָה) sy Nevi'im (נְבִיאִים) ary Ketûvim (כְּתוּבִים). Ireo dia manondro ny fizaràna telo hita ao amin'ny Baiboly hebreo. Ny hoe Tôrah dia azo adika hoe "lalàna"; ny Nevi'im (na Nebi'im) dia azo adika hoe "mpaminany (maro)" ary ny hoe Ketûvim (na Ketûbim) dia azo adika hoe "soratra (maro)".
Firafitry ny Tanakh
Mizara telo ny Tanakh, dia ny Tôrah ("lalàna") sy ny Nevi'im ("mpaminany") ary ny Ketuvim ("soratra"). Tsy mifanandrify tanteraka amin'ny fizaràn'ny Kristiana ny Testamenta Taloha izany. Misy boky 24 ny ao amin'ny Tanakh. Ny boky iray ao amin'ny Tanakh dia mety hisaraka roa na maro ao amin'ny Baiboly kristiana. Ao amin'ny Torah ihany izany no tsy mitranga. Ny anaran'ireo boky ao amin'ny Tanakh dia manomboka amin'ny teny hebreo hoe Sefer izay adika hoe "boky" na "horonana" ("horonam-boky").
Ny Torah (תּוֹרָה "Lalàna") dia ahitana boky dimy, ireo atao hoe Boky dimin'i Mosesy. Toy izao avy ny anaran'ireo boky ireo amin'ny teny hebreo ary ny fifanandrifian'ny anarana ao amin'ny Tôrah sy ny Pentateoka:
Sefer Bereshit : Genesisy
Sefer Shemot : Eksodosy
Sefer Vayikra na Vayikra : Levitikosy
Sefer Bemidbar : Nomery
Sefer Devarim na Devarim : Deoteronomia
Ny Nevi'im (נְבִיאִים "Mpaminany") dia mizara roa: ny Nevi'im rishonim (נביאים ראשונים "mpaminany taloha") sy ny Nevi'im aharonim (נביאים אחרונים "mpaminany farany" na "mpaminany taoriana"). Misy boky efatra ny ao aminan'ny Nevi'im rishonim ka ireto avy izy ireo:
Sefer Yehoshua na Yehoshua : Josoa
Sefer Shoftim na Shoftim : Mpitsara
Sefer Shemuel : Samoela voalohany sy Samoela faharoa
Sefer Melakhim na Melakhim : Mpanjaka voalohany sy Mpanjaka faharoa
Ny bokin'ny mpaminany sisa rehetra dia ao amin'ny vondron'ireo atao hoe Nevi'im aharonim; ireto avy izy ireo:
Sefer Yeshayahu na Yeshayahu : Isaia
Sefer Yirmeyahu (bokin'i Jeremià") na Yirmeyahu Jeremia
Sefer Yehezkael ("bokin'i Ezekiela") na Yehezkael : Ezekiela
Trei Assar (תרי עשר "Bokin'ny Mpaminany 12")
Sefer Hoshea : Hosea
Sefer Yoel na Yoel : Joela
Sefer Amos : Amosa
Sefer Ovadiyah na Ovadiyah : Obadia
Sefer Yohnah na Yohnah : Jona
Sefer Mikhah na Mikhah : Mika
Sefer Nakhum na Nakhm : Nahoma
Sefer Khavakuk na Khavakuk : Habakoka
Sefer Tsefaniyah na Tsefaniyah : Zefania
Sefer Khaggai na Khaggai : Hagay
Sefer Zekhariyah na Zekhariyah : Zakaria
Sefer Malakhi na Malakhi : Malakia
Sefer Tehillim na Tehillim : Salamo
Sefer Mishlei na Mishlei : Ohabolana
Sefer Iyyov na Iyyov : Joba
Sefer Shir haShirim na Shir haShirim : Tononkiran'i Solomona
Sefer Ruth : Rota
Sefer Eikha na Eikha : Fitomaniana
Sefer Qohelet na Qohelet : Mpitoriteny
Sefer Esther ("bokin'i Estera") na Esther : Estera
Sefer Daniel (bokin'i Daniela") na Daniel : Daniela
Sefer Ezra wu Nekhem'ya na Ezra wu Nekhem'ya : Ezra sy Nehemia
Sefer Divrei haYamim ("Bokin'ny Tantara") na Divrei haYamim : Tantara voalohany sy faharoa
Ny anjely, araka ny fivavahana sy fedrà maro, dia zava-manan'aina any an-danitra, izay irahin'Andriamanitra ho mpanelanelana azy sy ny olona ety ambonin'ny tany sady ho mpampita ny hafatra sy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olona.
Mety hampianatra, hanome vaovao, na hanome baiko avy amin’Andriamanitra ny anjely. Mety ho tsara na ratsy ny anjely, ka ny ratsy dia atao hoe Devoly sy demony (na demonia) fa ny tsara kosa dia atao hoe anjely fotsiny. Miresaka momba ny anjely ny soratra masin'ny Jiosy (Tanakh) sy ny an'ny Kristiana (Baiboly) ary ny an'ny Silamo (Kor'any). Ny taranja teolojika ianarana ny amin'ny anjely dia ny anjelolojia.
Ny Bokin’i Ezekiela dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Milaza fitsarana sy fandrahonana ny Israelita ny faminaniana raha mbola tsy rava ny Fanjakan’i Joda, fa faminaniana ny fanamelohana ireo firenena mpampahory ny vahoakan’Andriamanitra sy fanantenana ny hiverenan’ny voninahitr’i Israely kosa no votoatin’ny faminanianana nandritra ny Fahababoana tany Babilona. Ho tsaraina amin’ny asa nataony avy ny olombelona tsirairay sady hisy ny fitsanganan’ny maty ho velona. Haorina fanindroany ny Tempoly. Izany dia fahitana apokaliptika.
Isan'ny atao hoe Mpaminany lehibe ao amin'ny sokajin'ny Bokin'ny mpaminany ao amin'ny Baiboly ny Bokin'i Ezekiela, fa isan'ireo atao hoe Nevi'im aharonim ("Mpaminany taoriana") izy ao amin'ny fizaràna faharoan'ny Tanakh atao hoe Nevi'im.
Ny Bokin'i Mikà na Bokin'i Mika na Bokin'i Mikea dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Isan’ireo atao hoe Mpaminany madinika roa ambin’ny folo izay zana-tsokajin’ny Bokin'ny mpaminany ao amin’ny Baiboly kristiana sy isan’ireo ao amin’ny Nevi'im ao amin’ny Tanakh. Natao hamerina ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana ara-tsosialy ny mpaminany Mikà na Mika na Mikea. Ny boky dia mirakitra faminaniana natokana ho an’i Samaria renivohitry ny Fanjakan’i Israely ary ho an’i Jerosalema renivohitry ny Fanjakan’i Jodà, satria tsy nitondra ny fireneny hanompo an’Andriamanitra ny mpitondra tao fa nanompo andriamani-kafa sady nifetsy sy nangalatra ny fananan’ny malahelo. Hovalian’Andriamanitra noho izany i Israely sy i Jodà. Nefa nampanantena Andriamanitra fa amin’ny andro ho avy, ny vahoakan’i Israely sy ny an’i Jodà dia hiverina amin’Andriamanitra ary ny mpanjaka hotendreny dia hanao izay hampiadana ny vahoaka sahala amin’ny mpiandry ondry izay mikarakara ny ondriny sady hitondra fiadanana amin’ny tany rehetra.
Ny Bokin'i Nahoma dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana voasoratra tamin’ny taonjato faha-7 tao Jerosalema. Ao amin’ity boky ity ny mpaminany Nahoma dia manambara ny hitsarana sy ny hanamelohana an’i Ninive renivohitr’i Asiria (na Asora) noho ny fangejany ireo firenen-kafa. Maneho anefa i Nahoma fa Andriamanitra hamindra fo amin’izay miverina aminy. Fanehoan’Andriamanitra ny famindram-pony amin’ny olona ny fanasaziana ny fahavalony sy ny famotsorany ny vahoakany ho afaka amin’ny fifehezan’ny fahavalony. Vitan’Andriamanitra izany satria izy no mpanapaka ny tany rehetra.
Ny Bokin’i Rota dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha, ao amin’ny Baiboly, sy ao amin’ny Tanakh, boky masin'ny Jiosy. Mitantara ny fiainan’ny fianakaviana iray tamin’ny andron’ny mpitsara ny boky, ka manasongadina ny fifikiran’ny vehivavy moabita iray, atao hoe Rota, amin’ny rafozambaviny na dia teo aza ny fijaliana nahazo azy ireo. Lasa isan’ireo olona manan-danja indrindra eo amin’ny tantaran’ny Israelita i Rota, na dia avy amin’ny firenena hafa aza, noho ny niterahany ny razamben’i Davida mpanjaka.
Avondrona ao amin’ny atao hoe boky ara-tantara ny Bokin’i Rota ao amin’ny Baiboly kristiana fa isan’ireo atao hoe Ketuvim ("soratra") kosa ao amin’ny boky masina hebreo Tanakh. Atao hoe מגילת רות / Megilath Ruth ("horonam-bokin’i Rota") io boky io ao amin’ny Tanakh.
Ny Bokin'ny Zefania na Bokin'i Sôfônia dia boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Io boky io dia mirakitra ny faminanian’i Zefania na Sôfônia. Nieritreritra ny vahoakan’i Joda fa amin’ny andro ho avy dia hahatonga azy ireo ho firenana matanjaka Andriamanitra ka ho afaka mandresy ireo fahavalony sy hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana. Diso anefa ny fiheverany, fa hosazin’Andriamanitra ny vahoakan’i Joda sy ny firenena rehetra izay tsy nanaja azy. Izany no andro fitsarana, andron’i Iahveh. Ny hany fomba hanafahana an’i Joda dia ny fanajana an’Andriamanitra sy ny fivavahana aminy irery ihany.
Ny Bokin'ny Salamo, na Salamo, dia boky ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Taloha izay misy amboaran-kira sy tononkalo fiderana an'Andriamanitra miisa 150. Voasokajy ho bokim-pahendrena na soratra masina izy ka isan'ireo atao amin'ny teny grika hoe ἅγιογραφία / hagiographia ("soratra masina"). Voasokajy ho isan'ireo atao amin'ny teny hebreo hoe Ketuvim ("soratra") izy ao amin'ny Tanakh.
Araka ny lovantsofina taterin'ny Taratasin’i Aristea tamin'ny taonjato faha-2 tal. J.K., ny fandikan-teny ny Torah hono dia notanterahin'ny mpandika teny miisa 72 tao Aleksandria, tokony ho tamin'ny taona 270 tal. J.K. araka ny fangatahan'i Ptolemeo II.
Ny Soratra Masina dia ireo teny voasoratra sy notenenin'ireo olomasin'Andriamanitra notsilovin'ny Fanahy Masina. Amin'ny fivavahana jiosy sy ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao dia ny Tanakh (Testamenta Taloha hebreo) no lazainy hoe Soratra Masina fa amin'ny Kristiana dia ny Baiboly manontolo (Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao) no Soratra Masina. Azo aitatra ny hevitr'io andian-teny hoe Soratra Masina io ka mahafaoka ny boky masin'ny fivavahana tsirairay.
Ny Torah (תּוֹרָה), izay midika hoe "lalàna", dia fitambaran’ireo boky dimy voalohany ao amin’ny Baiboly amin'ny teny hebreo (Tanakh). Izy no fizaràna voalohany ao amin'ny Tanakh, eo alohan'ny Nevi'im sy ny Ketuvim. Atao hoe "Boky dimin'i Mosesy (na Moizy)" izy ireo. Ao amin'ny Baiboly kristiana dia ireto ireo boky ireo: ny Genesisy (na Jenezy) sy ny Eksodosy (na Esaody) sy ny Levitikosy (na Levitika) sy ny Nomery (na Fanisana) ary ny Deoteronomia (na Deoteronomy). Ny fitambaran’ireo no tondroina amin’ny hoe Pentateoka na Boky dimin’i Mosesy ao amin’ireo asa soratra kristiana.